Abanye babaXhasi bethu
Imisebenzi eyoyikekayo iqela lethu eliye lanegalelo kubaxhasi bethu!
Gxila kuphuhliso, uyilo, ukuvelisa, ukuthengisa kunye neenkonzo zeprojekthi yezixhobo zokudlulisa ubushushu.
Ukuseka ubudlelwane obusondeleyo neYunivesithi yaseShanghai Jiao Tong, kwiYunivesithi yaseTshayina yeTekhnoloji, iYunivesithi yaseShanghai Ocean, iYunivesithi yase-China yezeNzululwazi neTekhnoloji, kwiYunivesithi yaseHarbin yezoRhwebo.
Inelungelo elilodwa lomenzi wechiza lesizwe kunye nemodeli ezisetyenziswayo ezingama-22.
Yiba itekhnoloji kunye nesiseko sophando kwiYunivesithi yaseTshayina yeTekhnoloji kuTshintsho lobushushu oluphuculweyo kunye nokugcina amandla.
Thatha inxaxheba kuqulunqo lwemigangatho emi-6 yase-Shanghai njenge
"I-evaporative condensers yexabiso lokunciphisa amandla kunye nokulinganiswa kwamandla"
Consumption "Ukugcinwa kwamandla okubandayo kwiyunithi yexabiso elinomda kunye nokulinganiswa kwamandla"
"Inkqubo esemgangathweni yolawulo lwamandla eshishini"
Norm "Imilinganiselo yokhuseleko lokugcina imveliso ebandayo"
Osed "Kuvaliwe ukuvala inqanaba lamandla okusebenza kwamandla kwinqaba"
➢ "Inkqubo yokubumba inyani ye-axial fan yokusebenza kwamandla kunye nokugcina amandla okusindisa amandla amaxabiso"
Thatha inxaxheba kumgangatho oqhelekileyo "wokunyusa umoya wokungena komoya ovela evaporative iifriji zendlela yokuvavanywa kwelabhoratri" kuqulunqo lweKomiti yobuGcisa yoMgangatho weFriji.
Iqela leenjineli zeR & D ezibalaseleyo kunye nabasebenzi abanezakhono abanamava eminyaka.
Production imveliso koomatshini phambili kunye novavanyo ezifana iziko iwelding oluzenzekelayo, oomatshini ifuthe uvavanyo, njl
N Yiba umnini imveliso imveliso umbhobho lwasekhaya phambili phambili, kunye nombhobho ukugoba umgca.
➢ Yakho i-D1, uyilo loxinzelelo lwe-D2 kunye nelayisensi yokuvelisa.
Isatifikethi senkqubo yolawulo lomgangatho we-ISO9001-2015.
➢ Ukupasa isiqinisekiso seCTI.
Qual Owakho isiqinisekiso sokufakwa kombhobho kuxinzelelo lwe-GC2.
Ukuphucula isoftware yohlalutyo lwe-evaporative kunye neYunivesithi yaseShanghai Ocean, kwaye unikwe isiqinisekiso sobhaliso lwesoftware yekhompyuter seNCAC.
Science INzululwazi yeTekhnoloji yeTekhnoloji yeSayensi kunye neTekhnoloji.
Prise Ishishini lase-Shanghai High-Tech.
Inzululwazi yeNzululwazi yeTekhnoloji kunye neTekhnoloji-Ibhaso lesiBini.
Inkqubela phambili yeSayensi kunye neTekhnoloji yeShanghai- Ibhaso lesithathu.
Iklasi yeKhontrakthi yeShishini yeAAA.
Ilungu leManyano yoLondolozo lwaMandla eShanghai.
Ilungu eliLawulayo loMbutho weShishini lezeNzululwazi neTekhnoloji.
Ityala lokuqala le-Shanghai Gaoqiao Sinopec yokuqhekeza iprojekthi yokupholisa.
Ityala lokuqala lelizwe le-CNOOC (China National Offshore Oyile Corporation) iprojekthi yokupholisa irhasi yendalo.
Ityala lokuqala lelizwe lase-WESTERN MINING projekthi ye-sulphur dioxide yokunciphisa iprojekthi.
Ityala lokuqala lelizwe le-XIN FU biochemical ethyl acetate projekthi yokupholisa evaporative.
Uphando kunye nenkxaso yokubonisana. Iminyaka eli-15 yokumpompa amava obugcisa.
Ukuvavanywa kwezixhobo zoqeqesho lobuchwephesha.
-Ukuhlohla kunye nokulungisa ingxaki yokuSombulula.
Uhlaziyo lwesondlo kunye nophuculo.